Iklume lizimisele ukufunda lukhulu kukhilikithi e-India – Bayede News
Iklume lizimisele ukufunda lukhulu kukhilikithi e-India
Iqembu labesilisa lekhilikithi lihambele e-India ngenhloso
Iqembu labesilisa lekhilikithi lihambele e-India ngenhloso yokwakha iqembu elizogadla ngalo kweyomhlaba ye-T20 ezodlalelwa e-Australia ngonyaka ozayo. Ngokunjalo neqembu labasifazane lakuleli lisemkhankasweni ofanayo njengoba nalo lihambele e-India. Lizodlala imidlalo emine ye-T20 nemithathu yosuku olulodwa (ODI).
Le midlalo ibaluleke kakhulu njengoba kungeyokulungiselela iNdebe YoMhlaba ye-T20 ezokuba ngonyaka ozayo e-Australia ngoNhlolanja. Leli qembu lizosebenzisa le midlalo ukunika abadlali abasebancane ithuba lokuzibonakalisa hleze bazibekele indawo eqenjini elizolibangisa e-Australia ngonyaka ozayo. Omunye walaba badlali abasebancane wuNonkululeko Mlaba oqokelwe kwelesizwe okokuqala nogcwele injabulo ngokubizelwa kuleli qembu.
UNonkululeko oneminyaka eli-19 ubudala odabuka eNtuzuma, eThekwini ukhulume neBAYADE ekhona e-India. Uthe yiphupho layinoma imuphi umdlali ukuba agcine edlalele iqembu lesizwe noma ingabe ikuluphi uhlobo lomdlalo. “Ngijabule kakhulu njengoba liphumelele iphupho lami lokudlalela iqembu lesizwe nokuyinto ekade ngayifisa kusukela ngiqala ukudlala ikhilikithi,” kubeka uNonkululeko.
Uqale ukukhombisa amava akhe ngowezi-2018 ngesikhathi edlalela iqembu lesifundazwe iKwaZulu Natal Coastal emqhudelwaneni iCricket South Africa Women’s Week lapho esize khona iqembu lakhe lanyukela esigabeni esiphezulu lapho kudlala khona izifundazwe eziyisithupha ezihamba phambili kwikhilikithi yabesifazane.
Lokwenza kahle kwakhe kumzuzele indawo kwiqembu lesizwe labasakhula elaziwa ngokuthi iSouth African Emerging Team. Ukwenza kahle kwakhe kule midlalo kuhlangene nokwenza kahle kuWomen’s T20 Super League kumenze wabizelwa eqenjini elikhulu labesifazane lakuleli.
“Ngijabule kakhulu ngokubizelwa eqenjini lesizwe, into ekade ngangiyifisa kusuka ngisemncane, ngiyajabula ngoba iphupho lami liyafezeka,” kusho uNonkululeko.
Into enye ejabulisa kakhulu le ntombazanyana uhambo lwayo lokuqala lokuya phesheya kwezilwandle ngoba uthi kuningi azokufunda kulolu hambo njengoba i-India inezinkundla ezisiza abashwibi bamabhola ajikayo. “Ngizothanda ukufunda okuningi kulolu hambo njengoba kuyizwe elikhiqhiza abashwibi bomhlaba kanti nezinkundla ziyavumelana nendlela engishwiba ngayo,” kuchaza le ntokazi yakwaMlaba.
Intatheli yeBAYEDE imbuza ngakufisayo emidlalweni ezodlalwa uthe uma ethola ithuba lokudlala uzozinikela kakhulu aqhubeke nekhilikhithi emenze wabizelwa kuleli qembu. Uqhube wathi noma engadlalanga kodwa uzoleseka iqembu lapho limdinga khona aphinde afunde ngokubuka kozakwabo nakubadlali abanamava.
UNonkululeko selokhu efikile eqenjini uzizwa esekhaya ngoba vele iningi lezintokazi eziseqenjini uyazazi, futhi ufunda okuningi kuzona zimenza azizwe esekhaya futhi amukelekile. Okubuye kusize le ntokazi yaseNtuzuma eqenjini lesizwe ukuthi kukhona uNondumiso Shangase adlala naye eqenjini lesifundazwe iKwaZulu Natal Coastal.
Amalungiselelo aleli qembu aqale ezinyangeni ezedlule ngekhempu ebiseNational Academy ePretoria ngaphambi kokuba liphinde libambe enye eMgungundlovu eyabe iyizinsuku eziyishumi. Leli qembu labasifazane lizimisele ukwenza kahle ukuze lakhe iqembu eliqine ngokwanele likwazi ukwenza kahle kweyomhlaba ngozayo. Leli qembu alenzanga kahle kweyomhlaba ye-T20 nyakenye ebibanjelwe eWest Indies njengoba lakhishwa zibekwa kowamaqoqo.
Umqeqeshi weqembu lesizwe uHilton Moreeng uthe ukuqokwa kwabadlali abasebancane njengoNonkululeko kushiye iqembu lakhe linabadlali abathathu kuyo yonke indawo okuzokwenza abadlali balwele indawo eqenjini elizoqala. Uqhube wathi lokhu kulibeka endaweni enhle kakhulu iqembu lakhe.